Efa manana Recovery sy Root ho an'ny LG G3 miaraka amin'ny Android 6.0 Marshmallow | Androidsis
Francisco Ruiz | | Fanarenana Android, Android Root, LG
Raha iray amin'ireo mpampiasa ianao nohavaozina ny LG G3 anao amin'ny Android 6.0 Marshmallow ny alalan ' ny rindrambaiko poloney zarainay eto amin'ny Androidsis vao roa volana lasa izay, androany vintana ianao satria efa manana fomba azo ianteherana sy azo tanterahina apetraho ny Recovery sy Root ny maodely iraisam-pirenena LG G3 na ny maodely D855, izany rehetra izany maharitra ary tsy mila mampiasa solosaina manokana ho an'ilay fizotrany.
Fantatrao izao, raha te hahazo alalana ianao Fototra Android ho an'ny LG G3 miaraka amin'ny Android 6.0 Marshmallow ary apetaho ny fanarenana nohavaozina TWRP, Manoro hevitra anao aho mba tsy hanadino antsipirihany an'ity lahatsoratra ity satria hanazava ny dingana tsotra amin'ny volo sy famantarana isaky ny dingana ankoatra ny fizarana ireo rakitra ilaina rehetra ilainao hahazoana ny maodely iraisam-pirenena LG G3 anao. D855 Root amin'ny Android 6.0 Marshmallow.
1 Fepetra takiana ao an-tsaina ny Root LG G3 amin'ny Android 6.0 Marshmallow
2 Ilaina ny fisie raha te hahazo alalana amin'ny Root amin'ny LG G3 miaraka amin'ny Android 6.0 Marshmallow
3 Ahoana ny fomba hanongorana LG G3 amin'ny Android 6.0 Marshmallow ary hametraka TWRP Recovery
Fepetra takiana ao an-tsaina ny Root LG G3 amin'ny Android 6.0 Marshmallow
Mba hahazoana fahazoan-dàlana Root ny LG G3 miaraka amin'ny Android 6.0 Marshamallow ary apetraho na dia ny fanarenana TWRP novaina aza, mila mahafeno ireto fepetra tsotra ireto fotsiny ianao:
Mety ho an'ny maodely LG G3 D855 rehetra sy ny karazany any Amerika Latina.
Mitombina ihany ho an'ny Root LG G3 amin'ny kinova Android 6.0 Marshmallow, izany no v30b sy v30c.
Avelao ny debugging USB alefa amin'ny toeran'ny developer.
Ampidiro tsara ny bateria, tsara raha 50% farafaharatsiny amin'ny fiampangana azy rehetra, na dia ampirisihina hanao izany amin'ny enta-mavesatra 100 x 100 aza.
Araho ny dingana hitako ao amin'ny lesona video ho an'ilay taratasy, milahatra mitovy ary tsy mandingana na iray aza amin'izy ireo.
Ilaina ny fisie raha te hahazo alalana amin'ny Root amin'ny LG G3 miaraka amin'ny Android 6.0 Marshmallow
Tsy maintsy ampidino amin'ny endrika ZIP ity rakitra voafintina ity ary esory izany na aiza na aiza ao anaty fahatsiarovana anatiny na ivelany an'ny LG G3 modely D855 te-hametraka ny TWRP Recovery ianao ary hahazo ny alalana Root efa nandrasana hatry ny ela.
Vantany vao decompressed isika dia hahazo rakitra efatra samihafa, fisie roa amin'ny endrika APK ary fisie roa ao anaty endrika voafintina ZIP. Havelantsika izy ireo araka ny misy azy ireo ary hanohy ny fizotran'ny Famoahana ny maodely LG G3 D855 amin'ny Android 6.0 Marshmallow.
Ahoana ny fomba hanongorana LG G3 amin'ny Android 6.0 Marshmallow ary hametraka TWRP Recovery
Ny dingana manaraka, araka ny asehoko anao ao amin'ny horonantsary izay anoro anao anao hahita hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, dia ireto manaraka ireto:
Mametraka ny APK KingRoot izahay ary manatanteraka izany izahay mba hahazoana alalana Root vonjimaika.
Raha vantany vao azo ny fahazoan-dàlana Root vonjimaika, raha tsy miverina ny terminal mametraka avy hatrany ny APK an'ny AutoREC Marshmallow izahay ary manatanteraka azy isika.
Manaiky ny fampandrenesana izahay fa mila alalana SuperUser ny AutoREC ary miandry ny AutoREC Marshmallow izahay hanao ny Backup ny fanarenana tany am-boalohany.
Raha vantany vao vita ny backup, dia mampandre antsika ny AutoREC Marshmallow fa nahomby ilay kopia ary izany raha hanazava ny TWRP dia mila mikasika ny logo Android M fotsiny isika.
Miandry ny famaranana ny fizotra TWRP Recovery izahay ary raha vantany vao vita tsara ny fampandrenesana ny fizotrany dia tsindrio ny bokotra OK mba hamerenany ho azy ny terminal ao amin'ny TWRP Recovery izay vao napetraka.
Avy amin'ny fanarenana dia tsindrio ny safidy hametraka y mampirehitra ny zip'ny Permissive izahay.
Manokatra ny Google Play Store izahay ary ampidininay SuperSU na dia mbola tsy hosokafanay aza.
Manomboka indray amin'ny Mode Recovery izahayHo azy ireo dia vonoinay tanteraka ny terminal ary avereno indray izany amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo bokotra kely kokoa Power, rehefa miseho ny LG logo, dia mamoaka ny bokotra roa mandritra ny iray segondra fotsiny isika ary manindry azy ireo indray miaraka.
Ary farany, avy amin'ny Modified Recovery, miverina amin'ilay safidy isika hametraka ary amin'ity indray mitoraka ity dia misafidy ny rakitra voafintina amin'ny endrika ZIP mitondra ny anaran'i Beta Supersu.
Reboot System izao Ankafizo izao ny maodely LG G3 D855 anao miaraka amin'ny LG Android 6.0 Marsmallow ofisialy miaraka amin'ny alalana Root sy Recovery izay novaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Efa manana Recovery sy Root ho an'ny LG G3 miaraka amin'ny Android 6.0 Marshmallow izahay
Antonio OS dia hoy izy:
Mitombina izany raha handeha amin'ny kinova taloha (5.0?) Mankany amin'ny marshmallow?
Valiny amin'i Antonio OS
Jose Enrique Benitez Barrera dia hoy izy:
Eny, nataoko izay nolazainao ary hita fa tratry ny LG Logo isaky ny mamadika azy aho…. inona no ataoko izao ??
Valiny tamin'i José Enrique Benitez Barrera
Luis Fernando Morales dia hoy izy:
tsara, rehetra tsy misy olana, miarahaba anao aho
Valio i luis fernando morales
Mario davila dia hoy izy:
Efa manana ny fanavaozana ny 6.0 mba hahafahako mandray ny risika, izay mety ho tsara tokoa, raha hanao izany, (Te-hanao izany aho fa tiako hisy olona haharesy lahatra ahy).
Valiny tamin'i Mario Davila
wilmar dia hoy izy:
Tsy izany no fotony
Mamaly an'i wilmar
Saingy ny horonantsary nataonao teo aloha momba ny fampidinana azy io amin'ny Android 6.0 Tsara ho ahy raha nanampy ahy betsaka… Misaotra betsaka ary tiako ny mandeha io….
Tsy hitako izay ilàna Root, 6.0 dia ampy, arahabaona.
OMAR DURAN dia hoy izy:
SORATRA AN'ANDRIAMANITRA 6.0 ARY MISY TOKOA REHEFA Miverina toy ny 10 ora ny telefaona sela ary azo antoka izany, inona no azoko atao ???
Valiny amin'i OMAR DURAN
RAHA ampifandraisiko amin'ny compte io dia mijanona izy mba hamerina azy io dia ilaina ny miorim-paka indray SA INONA NO HATAOKO dia MAMPANDAINGA IZAO FA IZAO DAHATSORATRA MBA REBOOTSY ARY TSY MIjanona
Salama e. miasa ihany koa amin'ny kinova v30d-EUR?
Peluchi dia hoy izy:
Josep efa niasa taminao?
Valiny tamin'i Peluchi
Mauricio Forero dia hoy izy:
Andro tsara. Mety amin'ny kinova D851 T-Movile ve izy io? Raha tsia dia fantatrao ve hoe aiza no ahazoako azy? Mila manongotra ny D851 amin'ny rindrambaiko Android 6.0 an'ny rindrambaiko D85130D aho. Misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Mauricio Forero
Manana olana izay tsy hitako ny vahaolana, narahiko ny dingana 100 ao amin'ny tutorial mandra-pahatongan'ny dingana tokony hamerenako ny findainao hiditra amin'ny fanarenana, hay rehefa naverinao tamin'ny voalohany io rehefa mametraka ny fanarenana, eny Mety izany, ary rehefa mampirehitra ny zip mamela heloka aho, fa rehefa tsy maintsy mamono ianao ary miditra miaraka amin'ny habetsaky (-) miditra ny finday ny finday fa tsy ao amin'ny TRPW
Sarimihetsika HD App dia hoy izy:
Misaotra nizara an'ity lesona ity.
Mamaly amin'ny Movie HD App
Sariitatra Hd Apk dia hoy izy:
AutoREC Marshmallow mihitsy no hampandre antsika fa nahomby ilay kopia
Mamaly an'i Cartoon Hd Apk
Midina ny rohy fampidinana rakitra
Guuii Dread dia hoy izy:
Tonga lafatra izany, misaotra betsaka
Mamaly an'i Guuii Dread
Farihy Roi Álvarez dia hoy izy:
Vantany vao vita ny fizotrany, azonao atao ve ny manaisotra ny root root, manadio ary manome autorec?
Mamaly an'i Roi Álvarez Lago
Salama! Nanampy ahy ireo horonan-tsary !! Misaotra anao!! haingana, tsotra ary mora azo! ny tiako ho fantatra, azonao atao ve ny manaisotra ny root root, manadio ary ny autorec?
misaotra betsaka mialoha!
Tohizo fa tsara!
Castellchu dia hoy izy:
Salama, misaotra anao amin'ity fampianarana fohy ity, haingana, mahomby sy mahomby.
Etsy ankilany, ho anao izay manontany raha afaka manala ny fanadiovana ianao ary manala autorec sy ny hafa ... lazaiko anao fa ENY, mamafao azy ireo ianao, nataoko izany ary tsy nisy na inona na inona nitranga.
Ho anao izay nanodinkodina, nanimba, nanily, namidy, ... ny terminal amin'ny andrana, mbola misy ny vahaolana, mety ihany koa ho an'izay manenina ny fanovana azy io ary miorim-paka amin'ny finday:
- Ampidino ny rindrambaiko havaozina farany indrindra nataon'i imei ... ohatra ity pejy ity)
- Sintomy ny mpamily LG ary apetraho izy ireo.
- Ampidino ny programa LG FlashTool.
- Farany, araho izay lesona an'arivony rehetra amin'ny Internet momba ny "flashing KDZ amin'ny LG FlashTool" toa ilay avy amin'ny mpiara-miasa amiko, ohatra https://www.youtube.com/watch?v=fGeefuXR9w4
Vonona, manana ny "selular" toy ny vaovao ianao.
Ho an'ny mpamorona an'ity lahatsoratra ity, moltes gràcies company !!
Mamaly an'i Castellchu
Eny miasa izany, heveriko fa nalefako ilay fisie "beta supersu" fa tsy ilay rakitra "permissive". Inona no zavatra tsy ... (Mandoto tena aho). Mbỳ
Mamaly an'i Idiot
Rehefa avy nampidina ny supersu aho ary nividy hiditra ny fanarenana indray dia tsy hiditra fotsiny ny famerenan'ny orinasa azy.
Hahazo ny menio famerenan'ny orinasa ianao, milaza ianao fa toa mamafa ny zava-drehetra ary manomboka ny fanarenana
Elvis morales dia hoy izy:
Nanaraka ny dingana rehetra aho, ary marina ny zava-drehetra, tsy nisy hadisoako
Valiny tamin'i Elvis Morales
Luis Panama dia hoy izy:
apetraho ny fulmics 6.9 amin'ny LG d851 ary mamela ahy tsy misy signal imei izany. * # 06 # MEID ???? Tsy haiko ny mamaha azy. Fanantenantena ao amin'i Francisco Ruiz
Valiny ho an'i Luis Panama
Ry namako, ny zavatra mitovy amiko dia nitranga tamin'ny htc, tsy misy antenaina, ny imei dia angon-drakitra omen'ny mpiasan'ny orinasa anao, ohatra sprint, verizon, raha vao voafafa ny imei dia tsy afaka manao na inona na inona intsony ianao, amidio fotsiny ny selao ho an'ny faritra
kilver francis fuentes garcia dia hoy izy:
Salama fanontaniana miasa ho an'ny lg g3 d850 avy at & t miaraka amin'ny 6.0?
Mamaly an'i kilver francis fuentes garcia
Mety handeha ny zava-drehetra fa misy ny olana, mivoaka ny kingroot fa tsy misy paikady misy ary efa nanandrana tamin'ny fitaovana hafa aho ary tsy mandeha koa izany, namana fantatrao fa misy fomba hafa hamongorana satria raha tsy misy izany dia tsy azo atao. ny dingana hafa, misaotra
Manompo amin'ny kinova v30d
Manompo amin'ny kinova EUR30 vXNUMXd
cam4tokengenerator dia hoy izy:
Valiny amin'ny cam4tokengenerator
Erick madrid dia hoy izy:
Lazao amiko fa mety ho an'ny lg g3 d851
Valiny tamin'i Erick Madrid
Tsara, narahiko ireo dingana mankany amin'ilay taratasy sy finday misy taratasy fanamoriana. 4h niady tamin'ny telefaona aho ary mbola misy ny sary famantarana LG mihosin-dra, efa nanandrana namerina nametaka ny twrp aho ary nanandrana nametraka ny KDZ tany am-boalohany tamin'ny fomba fanavaozana ny firmware sy ny fitaovana flash. Ny findaiko dia v30c. Andao handeha fa ny mifanentana araka ny teoriao dia tsy. Ho hitantsika izao ny fomba famahana izany. Misaotra betsaka.
Namana tsy mandeha ny rohy.
Francisco, salama maraina, tsy misy rakitra hamaka ary nametraka Twrp aho, ahoana no fomba fampidinana azy ireo?
Ny Samsung Galaxy Note 6 dia afaka natomboka tamin'ny volana Jolay niaraka tamin'ny Android N
Mamorona fijanonana marobe amin'ny fampiharana mitovy amin'ny findainao amin'ny App Cloner